အံ့သြလောက်တဲ့ Messenger ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅) ခု - For her Myanmar
တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါ
မြန်မာပြည်မှာ Facebook တွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ messenger ကလည်း မရှိမဖြစ်အရေးပါလာပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် သူငယ်ချင်းတွေ၊ ချစ်သူရည်းစားတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတာကအစ အဝေးရောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ရင်းနှီးမှုမပြတ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါတင်မက အလုပ်ကိစ္စ အရေးကြီးဆက်သွယ်မှုတွေကို Messenger ကနေ ဆက်သွယ်လို့ ရသေးတာမို့ တကယ်ကို အသုံးဝင်တယ်လို့ ဆိုတောင် မမှားပါဘူးနော်…
ဒီတော့ Messenger နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလူသိနည်းသေးတဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကို အက်ဒ်မင်က ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ ….
Facebook ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ သုံးတဲ့အခါ ထောင့်မှာပေါ်လာတဲ့ Chat Box နဲ့ သုံးတာ ဒါမှမဟုတ် messenger ဆိုတဲ့ button ကို နှိပ်ပြီးသုံးတာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ လူသိနည်းတာတစ်ခုက Messenger.com ကနေ သပ်သပ်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပါ။
Messenger.com ကို သပ်သပ်ဖွင့်ပြီးသုံးတော့ Screen အပြည့် စိတ်တိုင်းကျသုံးလို့ရသလို Facebook ကိုလည်း သီးသန့် သုံးလို့ ရနိုင်ပါပြီ။
၂။ Messenger ကို သပ်သပ် Sign Up လုပ်လို့ရပါတယ်
အလုပ်အတွက်ကလည်း Messenger ကို မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ Facebook ကနေလည်း ခဏလောက် လွတ်မြောက်အောင် ထွက်ပြေးချင်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပြီလား… ဒါဆိုရင် ဒီ Facebook အကောင့်ကို ခဏ ပစ်ထားလိုက်ပြီး messenger အကောင့်သပ်သပ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်။
Messenger မှာ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေလောက်ကိုပဲ ဖုန်းနံပါတ်ကနေ တစ်ဆင့်add ပြီး ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
၃။ Messenger Lite
Messenger Lite ကတော့ အင်တာနက်လိုင်း အားနည်းတဲ့အခါမှာ သုံးဖို့အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖန်တီးထားတဲ့ App ဖြစ်တာမို့ လိုင်းမကောင်းရင်လည်း ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
သူက My day တို့၊ Games တို့၊ bot တို့ တော့ သုံးလို့မရဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ ဆက်သွယ်လို့ရအောင် ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
၄။ Scan Code
ဆိုပါစို့ တစ်နေရာရာမှာ လူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆုံတယ်။ သူ့ကို messenger ကနေဆက်သွယ်ချင်တယ် Facebook မှာတော့ Friend မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပါတော့။
ဒါဆိုရင် သူ့ကို Messenger ရဲ့ Scan Code ကနေ ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ..
Messenger ထိပ်က Profile ကို နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ။
ဒီလိုလေးပေါ်လာရင် ဝိုင်းပြထားတဲ့ နေရာလေးကို နှိပ်လိုက်နော်။
ဒါဆိုရင် ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Scan Code ဆိုရင် သူ့ရဲ့ Code ကို ဖတ်တာ။ My Code ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် Code ကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
၅။ Voice Message တွေကို Download ဆွဲလို့ ရပါတယ်။
Messenger က Voice message တွေကို သိမ်းထားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Forward ပဲ လုပ်လို့ ရနေတယ်။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲမရဘူးလို့များစိတ်ညစ်နေလား.. မပူပါနဲ့… သူ့ကိုလည်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့ ရပါတယ်။ ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Browser မှာ Facebook ကို ဖွင့်ရမှာပါ။
အရင်ဆုံး https://www.facebook.com မှာ ကိုယ့်အကောင့်ကို Log In ဝင်ပါ။ ပြီးတော့ www နေရာမှာ m ကို အစားသွင်းပြီး https://m.facebook.com ကို ဝင်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Facebook ကိုမှ နောက်ထပ် ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Message ကို သွားပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Voice Message ကို ရှာပါ။ ပြီးတော့ Voice Message ဘေးနားက အစက် (၃) စက်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့လိုဆို Download ဆိုတာလေး ပေါ်လာပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့ ရပါပြီနော်…
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Messenger နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို တော်တော် သိသွားလောက်ပါပြီနော်။ ပြောပြခဲ့သမျှအချက်တိုင်းက ယောင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တကယျကို အသုံးဝငျတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှပေါ
မွနျမာပွညျမှာ Facebook တှငျကယျြလာတာနဲ့အမြှ messenger ကလညျး မရှိမဖွဈအရေးပါလာပါတယျ။ လူငယျတှအေတှကျ သူငယျခငျြးတှေ၊ ခဈြသူရညျးစားတှနေဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံတာကအစ အဝေးရောကျနတေဲ့မိသားစုဝငျတှကေို ရငျးနှီးမှုမပွတျအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ဒါတငျမက အလုပျကိစ်စ အရေးကွီးဆကျသှယျမှုတှကေို Messenger ကနေ ဆကျသှယျလို့ ရသေးတာမို့ တကယျကို အသုံးဝငျတယျလို့ ဆိုတောငျ မမှားပါဘူးနျော…
ဒီတော့ Messenger နဲ့ ပတျသကျပွီးလူသိနညျးသေးတဲ့ အသုံးဝငျပုံလေးတှကေို အကျဒျမငျက ပွောပွပေးပါ့မယျ။ ဘာတှလေဲ ဆိုတော့ ….
Facebook ကို ကှနျပြူတာနဲ့ သုံးတဲ့အခါ ထောငျ့မှာပျေါလာတဲ့ Chat Box နဲ့ သုံးတာ ဒါမှမဟုတျ messenger ဆိုတဲ့ button ကို နှိပျပွီးသုံးတာမြိုးလုပျတတျကွပါတယျ။ လူသိနညျးတာတဈခုက Messenger.com ကနေ သပျသပျသုံးလို့ရတယျဆိုတာကိုပါ။
Messenger.com ကို သပျသပျဖှငျ့ပွီးသုံးတော့ Screen အပွညျ့ စိတျတိုငျးကသြုံးလို့ရသလို Facebook ကိုလညျး သီးသနျ့ သုံးလို့ ရနိုငျပါပွီ။
၂။ Messenger ကို သပျသပျ Sign Up လုပျလို့ရပါတယျ။
အလုပျအတှကျကလညျး Messenger ကို မဖွဈမနလေိုအပျတယျ။ Facebook ကနလေညျး ခဏလောကျ လှတျမွောကျအောငျ ထှကျပွေးခငျြတယျဆိုတာမြိုး ဖွဈနပွေီလား… ဒါဆိုရငျ ဒီ Facebook အကောငျ့ကို ခဏ ပဈထားလိုကျပွီး messenger အကောငျ့သပျသပျဖှငျ့လို့ရပါတယျနျော။
Messenger မှာ ကိုယျ့ဖုနျးနံပါတျနဲ့ အကောငျ့ဖှငျ့ပွီး ကိုယျရငျးနှီးတဲ့ သူတှလေောကျကိုပဲ ဖုနျးနံပါတျကနေ တဈဆငျ့add ပွီး ဆကျသှယျလို့ရပါတယျ။
Messenger Lite ကတော့ အငျတာနကျလိုငျး အားနညျးတဲ့အခါမှာ သုံးဖို့အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖနျတီးထားတဲ့ App ဖွဈတာမို့ လိုငျးမကောငျးရငျလညျး ဆကျသှယျလို့ရပါတယျ။
သူက My day တို့၊ Games တို့၊ bot တို့ တော့ သုံးလို့မရဘူးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အရေးပျေါအခွအေနတှေမှော ဆကျသှယျလို့ရအောငျ ဖုနျးထဲမှာ ထညျ့ထားသငျ့ပါတယျနျော။
ဆိုပါစို့ တဈနရောရာမှာ လူတဈယောကျယောကျနဲ့ ဆုံတယျ။ သူ့ကို messenger ကနဆေကျသှယျခငျြတယျ Facebook မှာတော့ Friend မဖွဈခငျြဘူးဆိုပါတော့။
ဒါဆိုရငျ သူ့ကို Messenger ရဲ့ Scan Code ကနေ ဆကျသှယျလို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ ..
Messenger ထိပျက Profile ကို နှိပျပွီးဝငျလိုကျပါ။
ဒီလိုလေးပျေါလာရငျ ဝိုငျးပွထားတဲ့ နရောလေးကို နှိပျလိုကျနျော။
ဒါဆိုရငျ ဒီလိုလေးပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ Scan Code ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ Code ကို ဖတျတာ။ My Code ဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ Code ကို ဖှငျ့လို့ရပါတယျ။
၅။ Voice Message တှကေို Download ဆှဲလို့ ရပါတယျ။
Messenger က Voice message တှကေို သိမျးထားခငျြတယျ။ ဒါပမေဲ့ Forward ပဲ လုပျလို့ ရနတေယျ။ ဒေါငျးလုတျဆှဲမရဘူးလို့မြားစိတျညဈနလေား.. မပူပါနဲ့… သူ့ကိုလညျး ဒေါငျးလုတျဆှဲလို့ ရပါတယျ။ ဆှဲမယျဆိုရငျတော့ အရငျဆုံး Browser မှာ Facebook ကို ဖှငျ့ရမှာပါ။
အရငျဆုံး https://www.facebook.com မှာ ကိုယျ့အကောငျ့ကို Log In ဝငျပါ။ ပွီးတော့ www နရောမှာ m ကို အစားသှငျးပွီး https://m.facebook.com ကို ဝငျလိုကျပါ။ ဒါဆို Facebook ကိုမှ နောကျထပျ ပုံစံတဈမြိုးနဲ့ ပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီမှာ Message ကို သှားပွီး ကိုယျလိုခငျြတဲ့ Voice Message ကို ရှာပါ။ ပွီးတော့ Voice Message ဘေးနားက အစကျ (၃) စကျကို နှိပျလိုကျပါ။ အဲ့လိုဆို Download ဆိုတာလေး ပျေါလာပွီး ဒေါငျးလုတျဆှဲလို့ ရပါပွီနျော…
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ Messenger နဲ့ ပတျသကျတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှကေို တျောတျော သိသှားလောကျပါပွီနျော။ ပွောပွခဲ့သမြှအခကျြတိုငျးက ယောငျးတို့အတှကျ အသုံးဝငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Tags: Facebook, Messenger, Social Media, technology, tips
၂၀၁၈ ဖိနပ်ဖက်ရှင်လောကကို လှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့တဲ့ ပူးပေါင်းမှု (၅) ခု